पति र भीनाजुको क्यान्सरबाट निधन भएपछि, नायिका स्वेता खड्काले गरिन क्यान्सर हस्पिटलको शिलन्यास ! « Online Tv Nepal
पति र भीनाजुको क्यान्सरबाट निधन भएपछि, नायिका स्वेता खड्काले गरिन क्यान्सर हस्पिटलको शिलन्यास !
Published :3March, 2020 10:26 am
सिन्धुपाल्चोकमा माझी बस्ती बनाइरहेकी नायिका श्वेता खड्काले समाज सेवामा फेरी अर्को फड्को मारेकी छन् । उनले ललितपुरको गोदावरीमा क्यान्सर हस्पिटल बनाउने भएकी छन् । त्यसका लागी उनले आज गोदावरी–९ छम्पीमा शिलन्यास गरी सकेकी छन् । पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको क्यान्सरका कारण निधन भएपछि श्वेताले नेशनल हस्पिटल एण्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टर बनाउन लागेकी हुन् ।